Mpianatry ny Oniversite : Tsy manaiky hanaovana azy ireo ho sorona -
AccueilRaharaham-pirenenaMpianatry ny Oniversite : Tsy manaiky hanaovana azy ireo ho sorona
02/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Anisan’ireo mioty hatrany ny vokatry ny korotana ataon’ny mpanao politika. Manoloana ny zava-misy, amin’ny fanakorotanana tarihin’ireo solombavambahoaka dia nivoaka tamin’ny fahanginany, ary naneho ny heviny ireo fikambanan’ny mpianatra eny amin’ny oniversitén’Antananarivo izay tsy manaiky intsony ny hanaovana azy ireo ho sorona amin’ny tsy fahafahan’izy ireo manatanteraka ny fianarany. Filohan’ny fikambanan’ny mpianatra avy amin’ny sampam-pianarana valo no nanao sonia fanambarana niaraka maneho ny tsy fankasitrahan’izy ireo ny fanakorontanana ny fianarany. « Mijoro izahay noho ny ahiahy aman-tahotry ny mpianatra maro amin’ny fiantraikan’izao savorovoro izao amin’ny fianarana. Manahy ny hisian’ny taona fotsy eto amin’ny anjerimanontolo », araka ny fanambaran ’izy ireo. Mitondra ny heviny, ary mamerina indray amin’ireo ray aman-dreny ny momba ny demokrasia ireto mpianatra ireto amin’ny tokony aha-modely azy ireo amin’ny fahaizana mifampiresaka sy mifanakalo hevitra ho enti-mitady, vahaolana iombonana ka tsy hanome ohatra ratsy ho an’ny taranaka fara amandimby.
Takian’ireo tanora mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo ireto ihany koa ny fitandroana ny soatovina malagasy. « Matoky ny fahendrenareo Ray aman-dreny hikatsaka ny tombontsoa ambonin’ny vahoaka malagasy amin’ny hanatanterahana fifidianana am-pilaminana, ka hamaritan’ny feon’ny vahoaka izay hampindraminy ny fahefaha hitondra ny tany sy ny fanjakana », hoy ihany izy ireo ao anatin’ity fanambarana ity.
Tetsy ankilan’izay, miantso ny fahatsapan-tenan’ny tanora malagasy ihany koa ireto fikambanan’ny mpianatra ireto mba ahatsapa fa manana adidy amin’ny firenena, ary tsy tokony hikatsaka afa-tsy izay mahasoa ny firenena. « Irinay ny tsy hamatorana anay tanora anaty kajikajy politika, satria tsy misy fiandaniana ny fanambarana atao fa teny am-panajana sy am-pahendrena avy amin-janaka », hoy ny antson’izy ireo.